Faalo ku saabsan is casilaadii wasiirada Iyo xubnihii kale – Ma runbaa inay Af gambi siyaasadeed ay wadeen? | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Published on October 28, 2015 by sdwo · No Comments
Marka hore waxaan salaamayaa dhamaan shacab weynaha Somaliland oo dhan meel kasta oo ay joogaan, gaar ahaan inta nabada Somaliland jecel. Inta aan jeclayna ilaahay ha soo hadeeyo aamiin
In la is casilo Iyo in shaqada la isku badalo Iyo in madaxweyne qofka uu arko inaanu shaqadii uu u igmaday qaban Kari waayo ka qaado xilka, intuba waa dastuuri. Laakiin anigoon siyaasi ahayn ama layga badiyo siyaasada waxaan ilaa doraad socotay Iyo is dabayaacan aan arkay waxay ii iftiimisay in arimuhu intan ka badnaayeen oo laba odhan karo afgambi dhicisoobay oo qorshaysnaa oo fashilmay bay ahayd tolow. Allahu yaclam. Ilaahay uun baa quluubta aadaamka og.
Hadaba Inta is casishay Ma runbaa inay Af gambi siyaasaded ay wadeen? Waa suaal u baahan in ay ka jawaabaan dadka iiga aqoonta badan siyaadada ama indhoindheeya. Waxase xusid mudan ama ah in la is weydiiyo ama laga faaloodo u baahan arimahan siyaasadaysan Iyo is casilaadahan dhacay.
Arinkan anigu waxaan u arkaa mid ahaa afganbi dhicisoobay ama dee sida dad badan oo siyaasada ka faaloodaa ka dhawaajiyeen dawlad mid kale laga hoos dhisayay bay ahayd waa yaabe. Waxaan arkay hadalo badan oo ka dhan ah dawlada ahmed siilaanyo oo ay shubayeen xubno dawlada ka tirsan oo weliba la socday madaxweynaha ayaantii dhawayd ee ay joogeen london. Horta marka hore waa ayaan daro in ahmed siilaanyo ragii uu doortay ee uu waliba wax ka dhigay aanay ahayn ee weliba ugu dul qaatay ficilo xunxun oo madaxweynaha magaciisa hoos loogu wiiqayay. madaxweynehu waa ragii uu sharafta u yeelay ee uu wax walba ugu dul qaatay xataa qaladaadkoodii..
Is casilaadu waa ok oo waxa uu qofku ama masuulku is casilaa marka uu hawsha loo igmaday qaban kari waayo sida imika dhacday, Iyo mar ah ku xumee Iyo weliba mar mar ah dastuuriyan, sida qofka is sharaxayaa uu xilka uu hayo uu iska casilo si uu waqti ugu helo loolamadiisa. Wasiir Hirsi oo anigu intii shaqsiyan aan bartay oo ahayd labadii sano ee u danbeeyay, kuna ogaa nin shaqo badan dadka Iyo dalkaba u hayay oo intaan ogahay nin hawl kar ahaa, dadku markay xafiiskiisa ugu tagaan ahaa mid u istaaga oo ixtiraam ku soo dhaweeya dadka. Kamaan filayn inuu abaalkii Ahmed SIilaanyo u galay gudi waayay oo afgambiga qorshaysnaa waday. Sidaan anigu u arko eh.
Wasiir waliba Iyo wadani kastaaba xaq buu u leeyahay, waana dastuuriyan Laakiin waxay ahayd inay si sharaf leh u tartamaan. Waan fahmi karaa in raga qaar ay munaasib ahayd inay is casilaan si ay u tartamaan laakiin qolyaha kale waxaan u arkaa inay is casileen maadaama lagu qabtay waxay wadeen intuu doonaba ha leekaadee?.
Anigoon duulaan ku ahayn mohamed biixi Iyo xirsiba, hadana Waxaan u arkaa in labaduba dagdageen oo ay weliba ku dagdageen inay yidhaahdeen waxa na soo gaadhay xantii madaxweynaha oo la lahaa muse biixi buu support garaynayaa, inkasta oo la cadeeyay maanta oo la sheegay inaan madaxweynahu odhan cid baan taageerayaa, hadana may ahayn ragii xan Iyo wax baa la lahaa sharafta isaga xayuubin lahaa, waxay karayeen inay odhan lahaayeen waanu banaynay shaqadii una sababeeyaan inay tartan galayaan. Mida kale hadii bal ay dhici lahayd in madaxweyne uu cid taageero uu u arko inay wadankan sii wadi karto yaa ka xaaraantimeeyay waa yaabe. Waa haday dhici lahayd waase la cadeeyay inaanu odhan cid baan taageerayaa. Muse biixi baa cadeeyay. Wayse fiicnaan lahayd hadii madaxweynuhu uu taageero buuxda siiyo muse biixi Waayo muse biixiba hiil Iyo hooba wuu la garab istaagay siilaanyo. Qolyahan kale ee is casilay iyagu hadal Ma leh oo waa raaciyeen uun baa qabaa Iyo inaanay marka horeba lahayn vision ama aragti kale Iyo plan B midna. Imikana Waxaan odhan lahaa muse biixi waa nin tanaasul Iyo dulqaadba lehe ee ha la shaqeeyaan isaga oo saaxiibtinimo cusub ha la bilaabaan oo gudoomiyahooda ha taageeraan ama cidii kale ee sharaxanba si aanay fartu ugu godnaan mustaqbalka. Xisbiga ha loo hiiliyo oo ha la midiibo xisbiga gudihiisa. Hadii kale chance ha u ahaato xisbiyada qaranka ee kale inkastoo imika iyagiiba isku maqan yihiin
Ta kale walee inaanan la yaabin nin damac leh oo raba inuu wax noqdo Laakiin waxa badan in qofkaa damaca lihi uu isagu xabad Iyo rasaas lugaha iskala dhaco oo aanu jaanisba Isa siinin sida imika muuqata ama aad aragteen ragii waaweynaa ee qaranka rabay inay hogaaniyaan siday u hadlayaan ama wax u dhigayaan. Sidee bay aniga Iyo qarankaba u hogaamin karaan Wax aragteen kolay Waxaan anigu dareemay oo ilaa shalay aan darsay in waxaniba aanay jirin laysu casilay ee ujeedooyin kale oo fashilmay oo aan weliba la hubin oo la yidhi waa xan Iyo kutidhi kuteen la isku kharibey.
Bal ila eega Madaxweynaha mar la weydiiyay in xantaa raga galaafatay ay wax ka jiraan wuxuu ku jawaabay “Eedaas la ii soojeediyay waxba kama jiraan, anigucid aan garab siiyay ma jirto, arrintaas golaha dhexe ayaa leh, xisbigu qaab buu leeyahay oo sharciyad buu leeyahay, markaa cida golaha dhexe halka uu maro ee xisbigu maro uun baan marayaa,” ayuu yidhi madaxweynuhu Ahmed Silaanyo Oo Asxaabtisa Xilka Baneysay La Hadlayee Ayaan Ka Hayaa Hadeg Degin Rag Badan Oo Bilaa Shaqo ah Ayaa Joga idinka Iska Baxa Kuwa Kale Ayaa Imanayee Madaxweynaha Waxaa Laga Daremayee Jawi farxadeed Wanu Dhoola Cadenayee
Bal halkana ka dhagayso MUUSE BIIXI ABDI jawaabtiisa maanta
Mar muuse la Waydiyay Wasiirada Iscasilay Ayuu Yidhi “Nagadaa Aniga Nimankaas Waban Ku Qoslay Sidan Miyaa Han Fog Iyo Hiigsi Siyaasaded Loo Yeshaa Xirsi Cali Waban Kayaabay, MOHAMED Biixi Isaga Xalkisa Waa Bariga Dhaxe”
Yaan ku sii fogaan ragaas wadanka u soo shaqeeyay Laakiin midna kama filayn weliba Xirsi oon ku ogaa nin aan aayar is dhiibin. Labaduba sharaf bay inaga mudan yihiin. Mohamed biixi isaga aad Uma aqaan laakiin intaan ogahay khibrad dheeraada Iyo tacliinba waan ku ogaa sidaan CVgiisa ka arkay Laakiin kolay waxbaa si noqday. Aakhirkana Kulmiye saaxiguu tagi oo gacmahaa la is qabsan oo la midoobi sidii caadada inoo ahayd
Qoraalkani waa intii aan ilaa shalay maskaxdayda kala sheekaysanay Iyo fikirkayga uun baan soo qoray deedna is idhi dadka reer Somaliland bal la wadaag. Ee yaan la isku nicin. Qof walba ha la ixtiraamo fikirkiisa yar ee isaguun ilaahay gaarka uga dhigay
Ahmed Yasin Mohamed Jama aymjama@hotmail.co.uk